Hiarahan’ny gitara maro : Mpanakanto ampolony hamerina ny « Gilitabe » -
AccueilVaovao SamihafaHiarahan’ny gitara maro : Mpanakanto ampolony hamerina ny « Gilitabe »
10/07/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Niainga tamin’ny tenin-jatovo. Teny iray entina hilazana ny gitara ny « Gilita ». Mpanakanto fantatra eo amin’ny fitendrena io zava-maneno io araka izany no hiaraka hiaka-tsehatra hamerina ilay seho « Gilitabe ». Seho tokony notanterahina ny volana novambra tamin’ny taon-dasa, saingy voatery nofoanana noho ny fisian’ilay valanaretina Pesta. Mpanakanto manodidina ny 18 no hiaraka hitondra ny talentany amin’io seho io, izay hotanterahina etsy amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny 5 aogositra ho avy izao. Hita ao anatin’izany ireo mpitendry efa sangany miandahy miambavy toa an-dry Tselonina, Benny, Sefo, Gothlieb, Fara Gloum, Njila, Samoëla, Kiady, Nini Kolibera ary Mika sy Davis. Handravaka izany amin’ny feo mangany kosa ry Lilie, Inah, Rija Ramanantoanina, Luk, Mahery…
Ireo hira niangaliana tamin’ny gitara no ho entin’izy ireo amin’io fampisehoana io, ka tao anatin’izany ireo hira nanombohan’ny « folk song » teto Madagasikara toa ireo sangan’asan’ny tarika Mahaleo, Lôlô sy ny Tariny, Tselonina… Toa izany koa anefa ireo vazo taty aoriana raha tsy hitanisa afa-tsy ireo sanganasan-dry Mika sy Davis. Efa andran-tsira mandeha amin’ireo haino aman-jery samihafa ahitana taratra ny endriky ny « Gilitabe » ny hira tambatra hiarahan’izy ireo mikalo.